Isaziso seNtlekele ye-Istanbul yeChannel! Ukunyikima komhlaba okulindelekileyo kungachaphazeleka ngu-9-10 Ubunzima | RayHaber
ikhayaETURKEYSithili saseMarmara34 IstanbulIsaziso seNtlekele ye-Istanbul yeChannel! Ukunyikima komhlaba okulindelekileyo kungachaphazeleka ngu-9-10 Ubunzima
Isaziso seNtlekele ye-Istanbul yeChannel! Ukunyikima komhlaba okulindelekileyo kungachaphazeleka ngu-9-10 Ubunzima; Ilungu le-Academy yezeNzululwazi Dr. UNaci Görür wenza iinkcazo eziphawulekayo ngeprojekthi yeKanal Istanbul. Egxininisa umngcipheko oza kudalwa yiprojekthi eIstanbul, uGörür wathi, fazla Ngexesha lokumbiwa komsele, kuya kubakho ukutyibilika okugqithileyo, ukugqabhuka komhlaba kunye nokuwa ngokweempawu zomhlaba. Ukuba inyikima elindelekileyo yenzeka, umlomo we-Marmara yesiteshi uza kuchaphazeleka bubunzima be-9-10 kwaye kunokwenzeka ukuba ube nakho ukonakala kakhulu.
Ukutsho ukuba malunga ne-1-1,5 yezigidigidi ze-m3 ziya kumbiwa kwaye i-ecosystem, izilwanyana kunye nezityalo kule ndawo ziya kutshatyalaliswa kakhulu, utshilo uGörür, "Iindawo ezincinci ziya kwenziwa eMarmara. Ukujonga inkqubo yempazamo esebenzayo eMarmara, lo msebenzi uza kuba semngciphekweni omkhulu. Ngexesha lokumbiwa kwejelo, kuya kubakho ukubhoboka okugqithileyo, ukhukuliseko lomhlaba kunye nokuwa ngokweempawu zomhlaba.
"I-9-10 INOKUFUMANEKA KWI-VIOLENCE"
Ukuphawula inyikima enokubakho eIstanbul, uGörür uthe, irse Ukuba inyikima elindelekileyo yenzeka, umlomo we-Marmara weSiteshi uza kuchaphazeleka ngamandla e-9-10. Kuyenzeka ukuba isakhiwo esinganyamezeliyo ukunyakaza ngokuthe nkqo kwaye nkqo, njengomsinga, sinokufumana umonzakalo omkhulu kwinyikima (okanye enye eyalandelayo).
UGörür uvandlakanisile eli phulo ngokwemeko yejoscience kunye neenyikima ngokwabelana ngemephu ezithile kwaye zidwelise okulandelayo
1- INJONGO YENJONGO: Istanbul Bosphorus ukubonelela ngokulula kokuhamba ngeenqanawa, ukuthintela iingozi nokubonelela ngengeniso.
I-2- IXESHA: Iya kugutywa ecaleni kwentlambo ephakathi kweChibi iKüçükçekmece-Terkos. Iya kuba bububanzi nobunzulu obunokudlula inqanawa enye.
I-3-SOIL (iJeology): Ijelo liza kusika iMiocene kunye nemincinci, imihlaba enobunzima ngakumbi (sediments) kwingingqi yaseKüçük Çekmece kwaye iyakungena kwiiyunithi ze-Eocene-Oligocene njengoko iya emantla. Lo mgangatho womhlaba udityaniswe nelitye elinzima kakhulu kunye nelitye eliludaka elithambileyo, isilivere, isanti kunye nemarble. Ukungena kwesitishi kuLwandle Olumnyama kubandakanya umhlaba omdaka. Ukuba eli jelo ligwetyiwe, akunakuphepheka ukuba:
a) Phantse izixhobo ze-1-1,5 bhiliyoni ze-m3 ziya kumbiwa. Ukumbiwa kwezi zixhobo kuyakuthatha iminyaka, oomatshini bokugrumba kunye neziqhushumbisi ziya kusetyenziswa, ke ngoko intlambo kunye ne-ecosystem yayo, izilwanyana kunye neflora ziya kutshatyalaliswa kakhulu.
b) Akukwazeki ukubeka into yesi sixhobo naphi na. Mhlawumbi, ii-islets ziya kwenziwa eMarmara. Ukujonga inkqubo yempazamo esebenzayo eMarmara, lo msebenzi uza kuba semngciphekweni omkhulu.
c) Ngexesha lokumbiwa kwejelo, kuya kubakho ukuntywila okugqithileyo, ukuntywila komhlaba kunye nokuwa ngokuxhomekeke kwipropathi yomhlaba.
d) Xa kufunyenwe kumgangatho wolwandle, ishaneli iya kusebenza njengesixokelelwano sokuhambisa amanzi kwaye iya kutshabalalisa amanzi angaphantsi komhlaba ajikeleze umjelo kwaye abangele ukwenziwa kwe salin kwingingqi.
e) Umda phakathi kwejelo kunye neBosphorus iya kuba sisiqithi, ngoko ke zonke iinkqubo zothutho ziya kutshintshwa kwaye zinzima. Ngokukodwa izakhiwo ezodlula kwiCanal ziya kuba semngciphekweni kwaye zibize kakhulu ngenxa yokuphakama kunye neemeko zomhlaba. Ukwahlula kwesi siqithi kwiTraceace kunokuba yimingcipheko kwezomkhosi.
f) I-Istanbul ilinde inyikima. Ukuba inyikima elindelekileyo yenzeka, umlomo we-Marmara weSiteshi uyakuchaphazeleka ngamandla e-9-10. Isakhiwo esinganyamezeliyo ukunyakaza othe tye kunye nothe nkqo, onjengomsele, sinokonakaliswa kakhulu yile nyikima (okanye eyalandelayo).
g) Ngokwabasemagunyeni, kuya kubakho isixeko okungenani i-3 yezigidi ezizungeze iChannel. Oku kuya kwandisa umngcipheko weenyikima. Ukugcwala ngaphezulu kuthetha ukuphulukana nobomi kunye nepropathi.
h) Ijelo liza kudibanisa uLwandle Olumnyama, yenye yezona lwandle zingcolisekileyo emhlabeni, kunye neMarmara eswelekayo ngoku. Lonke ungcoliseko lokwenza imveliso kuMbindi weYurophu luya kuzaliswa eMarmara.
I) Inkqubo ye-Oceanographic yeMarmara iya kuphazamiseka kwaye ukusetyenziswa kweoksijini kulwandle kuya kukhawuleziswa. Oku kuya kwenza iimeko zokuphila zibe nzima ngakumbi. Njengoko kunokubonwa, iprojekthi enjalo inesambuku kunokubuyisa. Ngapha koko, endaweni yale projekthi eza kuxabisa iibhiliyoni zeedola, imisebenzi emininzi yelizwe enokwenziwa. Ngobugcisa banamhlanje, ukugcwala kwiBosphorus kunokujongwa kwaye kulawulwe ngokukhuselekileyo. Oku kubiza kakhulu kwaye kungenelwe ilizwe.
Imephu yeKhanal Istanbul
IPaneli ye-Istanbul yeProjekhthi yoKwenyusa uMhlaba oLindelweyo?
Intloko ithintelwe kweli xesha! IDenizli-Izmir yeeShedyuli zoTyelelo…
Isilumkiso esivela kwi-TMMOB: Yeka isiteshi se-Istanbul Madness
Ukusuka kwi-Ministry, Channel Istanbul Alert
Isekela le-CHP likaSekela-Istanbul USekela: "Ya Channel Ya Ya
Kanal Istanbul, isiqithi sase-West Istanbul kunye nemingcipheko yomhlaba
Ye3 egcinwe kwiGug I-Grand Istanbul Tunan nakwiCanral Istanbul…